CUNTO YAR OO REER IRAN AH OO QOOB KA CIYAARA: SHARAX, SAWIR, DARYEEL IYO DAYACTIR - BEERAHA DIGAAGA
Iran nuucyada sare ee duulaya: sida loo daryeelo iyo sida loo quudiyo guriga
Farxad, sharaf leh, farcanka quruxda badan ee shimbiraha Faaris - waa sidan qofku u sharaxi karo qoob-ka-cayaarka dagaalyahanada iiraaniga ah, kaas oo ka yimid wakhtiyadii hore ee qurxinta boqorrada boqortooyada. Kumanaan sano ka hor ayaa taranka lo'da ee shimbirahaasi loo tixgeliyey shaqadii xayawaanka, caan ka noqoshada iyo farsamooyinka la ilaaliyey ilaa maanta. Haddii aad rabto in aad xayawaanka Nige ee guriga, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo siiyo xaalado raaxo leh shimbiraha.
Daraasadaha taariikhyahanadu waxay tilmaamayaan in Ancient Persia ay ahayd meesha uu ku dhashay ee kow iyo xamaamyada ugu horreeya. Waxay ahayd meeshii ay xamaamyadu bilaabeen in ay jilaan oo ay ku hayaan xayndaabka xayawaanka, iyo shuruudaha aasaasiga ah ee shimbirta wanaagsan waxay ahaayeen dulqaad, awoodda ay u duuli karto sareeya iyo muuqaal qurux badan. Si loo go'aamiyo tayadaas, shimbiraha ayaa abaabulay tartamo. Ka dib millennia ka dib, taranka xayawaanku wuxuu ku hadhay dhaqan caan ah oo Iran ah, laakiin weli waa la heli karaa dadka ugu mudan ee haysta: Tusaale ahaan, wax ka badan 5% dhammaan beero-duurka waxay jilaan oo iibiyaan shimbirahaas. Waxa xiiso leh, maanta shuruudaha xulashada ee shimbiraha ayaa isbeddelay: qaabka ugu muhiimsan ee shimbiraha waa tayada duulimaadka, taas oo ah sababta noocyo badan oo dibadda ah oo ka mid ah caleemo-yaqaanka Iraan ay soo baxeen.
Ma taqaanaa? Dumarka qoorgooyadu waxay ukun dhigi karaan oo keliya marka ay joogaan labka ah. Maxaabiis ahaan, muraayad ayaa loo adeegsadaa in lagu khiyaaneeyo shimbir.
Sifooyinka ugu muhiimsan ee dibadda ee shimbiraha Iran:
Midabka: qaabka iyo midabka baaluqu wuxuu noqon karaa mid kasta, kuwa ugu caansan waa casaan, cawl, jaalle, yicib iyo madow;
dhererka jirka: 34-37 cm;
madaxa: qaab wareegsan ama qoton leh, cabbirka yar, ayaa lagu dabooli karaa boomaato saafi ah, oo lagu qurxiyo fargeeto ama calaamad;
indhaha: yar, midabkiisu wuxuu ku xiran yahay hooska daloolka;
dhala: casaan ama casaan mug leh, oo leh caarad cufan, dheer, celcelis ahaan, dhererkiisu 1.5-2 cm;
qoorta: qaro, gaaban;
jirka: dhererka, dhererka celceliska waa 35 cm, laakiin shaqsiyaadka ballaaran waxay gaareysaa 45 cm;
baalasha qaabka qotada dheer, dhirta jirka, dhererka celceliska waa 21-25 cm, laakiin shaqsiyaadka ballaaran waxay gaari karaan ilaa 30 cm;
daboolka: ballaaran, ka kooban baalasha dheer (10-12 cm, wakiillada waaweyn - ilaa 18 cm);
xejin: dhexdhexaad ama dherer dherer ah, waxay noqon karaan kuwo cagajirsan, kosmachy iyo roodhida qaababka leh.
Akhri wax ku saabsan cayayaanka caanka ah ee xamaamyada dagaalka.
Xilliga geeddi-socodka doorashada, noocyo badan oo "Iiraaniyiin ah" ayaa la siiyay. Iyadoo ku xiran meesha muuqaalka ah ee taranka, xamaamyada leh midabyo kala duwan iyo astaamaha xaraashka.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee xayawaanka waa midabka kala duwan ee baaluqa madaxa. Jirka boodhku wuxuu leeyahay daboolka cad, oo madaxa iyo qoorta waxaa lagu rifey midabyo mugdi ah oo ka yimid midab madow ilaa madow. Noocyadaas ayaa si gaar ah loo qiimeeyaa oo loo sharxaa, maaddaama ay adagtahay in la xakameeyo, laakiin duulimaadka quruxda badan ee shimbiruhu waa abaalmarintan.
Noocyo caan ah oo caan ah oo caan ah ninkan Iran. Muuqaalka shimbiraha waa mid aad u la mid ah qoryaha, cajiib ah sidoo kale waa mid aad u cajaa'ib leh - garbaha ayaa gaaraya 70 cm. Madaxa waa la soo koobay, gogosha way gaaban tahay. Ma jiraan wax aad u sarreeya oo midabkiisu yahay - qoob-ka-xashiishka Teheran waxay noqon kartaa midabyo iyo qaabab kala duwan.
Ma taqaanaa? Kharashka qashinka ugu qaalisan aduunka ayaa ahaa 41 kun germany.
Noocani waa mid caan ku ah qaybta galbeed ee dalka, sababtoo ah magaca gobolka, xamaamyada waxaa badanaa loogu yeeraa xayawaanka Azerbaijan. Muuqaalka muuqaalka ah ee Shimbiraha Taabriz waa qaabka qotada dheer ee madaxa iyo jirka. Qaraabada tooska ah waa bakteeriyada Baku.
Qaybahani waxay kaceen natiijo ka timid shaqada taranta ee magaalada Xamaara. Muuqaalka ugu muhiimsan ee shimbiraha Hamama waa boogo dhaadheer oo dhaadheer ku jira lugahooda, kuwaas oo gaari kara 20 cm. Iyada oo ay sabab u tahay xulashada joogtada ah, noocyada lagu sharraxay boodh aad u yar ayaa sidoo kale u muuqday.
Sida ku qoran magacan waxaa lagu daray laba nooc: Tegriz iyo xamaamyada Tehran. Magaciisa waxaa u sabab ah qaabka dabeecadda ee madaxa iyo dhabannada. Karagezas waa jilicsanaan, caato, shimbiraha soo jiidatay, waxay kudhex gashan yihiin suufka saafiga ah ee madaxa iyo qaab jidhka ah.
Inkasta oo ay kala duwan yihiin muuqaalka, muuqaal guud oo loogu talagalay dhammaan xamaamyada dagaalku waa habka diyaaradda, oo ay weheliso daroogada hawada (waxaa badanaa lagu magacaabaa ciyaar). Magaca "dagaal" xamaam oo helay natiijo ka timid cod gaar ah - dagaal, kaas oo ka soo baxaya boogaha baalashooda inta lagu jiro duulimaadka. Codkani wuxuu aad u sareeyaa in la maqlo meel fog oo shimbir ah, xitaa haddii aan la arki karin. Kalluumaystayaasha waxay jecelyihiin inay yiraahdaan xamaamyada "riix" hawada. "Iiraaniyiinta" waxay u duulaan si tartiib ah oo degan, si fududna way u adkeysan karaan madaxa, iyo cayaartooda waxay keenaysaa farxad iyo gebi ahaanba neefsanaya.
Waa muhiim! Wixii foomka jirka ah ee caadiga ah ee qunbaha maxaabiista u baahan tahay inuu tababaro ugu yaraan 2-3 jeer toddobaadkii subixii ka hor quudinta. Tababarku waa suurtagal oo kaliya xaaladaha cimilada wanaagsan!
Sifooyinka ugu muhiimsan ee duulimaadka ee xamaamyada reer Iran:
awooda duulimaadyada dheeraadka ah. Celcelis ahaan, xamaamku waxay u duuli karaan 3-5 saacadood, gaar ahaan shimbiraha adagi waxay joogi karaan hawada illaa 8-10 saacadood;
awood u leh inuu koro
laga yaabaa in hawada lagu xiro ilaa 2-3 daqiiqo. Xaaladahan oo kale waxaa loo yaqaan "rack outlet".
Noocyada ugu weyn ee la dagaallanka burcadka Iran:
Stolbovoy. Isla mar ahaantaana shimbirta ayaa kor u kacda dhowr mitir waxayna bilaabeysaa inay dib u qabsato dib u noqoshada, kadibna mar kale soo baxdo oo dib u soo celiso ciyaarta. Mararka qaarkood shimbiraha waxay u fuulaan dhererkoodu 15 mitir.
"Iyadoo wata". Shimbirta ayaa si tartiib ah u duulaysa, kadibna waxay kufidaysaa daboolka sida fanoolaha oo qaboojiya dhowr ilbiriqsi, ka dib markaa ay bilaabato in ay qabato laf dhabarka.
Iskuday. Shimbirta ayaa kor u kacda, sida haddii ay ku dhex foorarsato hawada oo si joogto ah u duubeysa baalasheeda. Dagaal noocan ah waa mid aad u adag oo xamaam u ah, waxaa lagu samayn karaa shakhsiyaadka ugu adag, sidaas darteedna waxaa la arki karaa in yar.
Ribbon. Shimbiruhu ma jiidanayo hawada, mana tago tuubada, laakiin si fudud ayaa u duulaya inta lagu jiro duulimaadka caadiga ah.
Beeraleyda digaaga ee cusub ayaa xiiseynaya inay wax ka bartaan waxyaabaha ku saabsan nacnacyada taranka, cuntadooda iyo jirkooda.
Si loo ilaaliyo shimbiraha ayaa u baahan in la dhiso dovecote. Shuruudaha aasaasiga ah ee aviary iyo qorshahiisa waa sidan soo socota:
Goobta Maadaama ay xayawaanku ku yaryihiin difaaca jirka, dovecote waa in ay ka fogaataa ilaha infakshanka: taangiyada feerka, mooska, beeraha, guryaha digaagga iyo guryaha digaaga, iwm. Waa wax macquul ah inaysan lahayn khad koronto iyo geedo badan oo u dhow.
Cabbirka xayiraadda iyo cufnaanta dhulka. Labada qof ee shimbiruhu waa inay ahaadaan ugu yaraan 50 mitir kiiloomitir. Fadlan meeshan waa inaad ku darto meel loogu talagalay buulada, quudinta, biyaha. Heerkulka guryaha roodhida sida caadiga ah kama badna 2 m.
Musqusha socodka. Cabbirkiisu waa inuu ahaadaa mid la mid ah xamaaradda. Xagga sare iyo dhinaca dhinac kastoo ka mid ah dhulka waxaa lagu ilaaliyaa birta birta ah, dabaqa waa in lagu daboolaa boor ama jilbaha.
Kuleylka. Cunto khibrad leh ayaa leh inaysan jirin baahi loo qabo habka kuleylinta gaarka ah, laakiin waxaa habboon in la daryeelo rinjiga iyo adkeynta guriga. U hubso inaad baabi'iso dhammaan qorshaha iyo dillaacinta, diirran dabaqa oo si joogto ah u beddel qashin si aad isaga ilaaliso qoyaanka. Xasuusnow in heerkulka wanaagsan ee xagaaga uu yahay +20 ° C, iyo jiilaalka - + 5 ... + 7 ° C.
Hoos-u-dhiska. Nidaam hawo ayaa loo baahan yahay si loo tirtiro urta, carbon dioxide iyo siinta hawo cusub. Waa mid aad u haboon in la qalajiyo qolka iyada oo la dhejiyo albaab mesh ka dambeysa midka ugu muhiimsan gudaha gudaha. Waxa kale oo aad ka dhigi kartaa godad yar oo dabaq ah oo dhulka hoostiisa ku yaal, saqafka waa inuu ahaadaa tuubo xiran oo qiiq ah.
Roaches Lambarkoodu wuxuu ku xiran yahay tirada xoolaha. Caadi ahaan qoryaha waxaa laga sameeyaa baararka qoryaha oo leh qayb ka mid ah 2-4 cm, oo googo'an ku dhejisan derbiga. Wixii nadaafad ballaaran iyo sahlanaanta jeermi-dilista, baararka waa in si habsami leh loo nadiifiyaa loona gooyaa. Masaafada safka ah iyo dabaqadu waa in ka badan 50 cm.
Nest. Qodobada ugu fiicnaanta buulkuna waa: dhererka - 80 cm, width - 40 cm, dhererkeedu waa 30 cm.Waxaa xiiso leh in dhediguhu doorbidaan in ay qalabeeyaan dhismayaashooda, sidaas awgeed waa wax macquul ah inay ka baxaan qalabka dhismaha iyaga oo ku jira guriga qoryaha: cawska, caws iyo caws. Haddii kale, qoollada waxay diidi karaan in ay kulmaan.
Feeders iyo khamriga. Feeders waxay noqon karaan sanduuqyada ama automatic. Xaaladda kowaad, waa la samayn karaa si madaxbannaan, ikhtiyaar dambe ayaa ku habboon sababtoo ah waxay u baahan tahay kaqaybqaadashada dadka ee ugu yar. Waxaa haboon in la tixgeliyo in dadka waaweyn iyo xayawaanka yaryar ay ubaahan yihiin in ay qalabeeyaan feederiyeyaasha shakhsi ahaaneed.
Beddelka Joogitaankiisa ee dabaqyada waa qasab ah jiilaalka. Dhoobada, caws iyo caws, ciid, peat qallalan ama laamo yar oo leh lakab 5-10 cm waxaa loo isticmaalaa sida sariirta, iyaga oo ku jira lakabka qoryaha qoryaha ama qoryaha si looga hortago khatarta cudurada faafa.
Saldhigga cuntada ee shimbirahan waxay ka kooban yihiin cagaarka casiirka ah iyo hadhuudhka. Qiyaasta qiyaasta dalagyada kala duwan ee cuntada:
10% dhammaan maaddada iyo miraha kale: cagaarka, digirta, miro, miraha gabbaldayaha.
Ilaha cagaarka ayaa ah caleemo kala duwan: alfalfa, dhirta, isbinaajka, lettuce, nettle, kaabajka, sorrel.
Soo ogow sida aad u quudin kartid digirta xayawaanka ah iyo inta xayawaanka sannadka ah ay ku nool yihiin guriga iyo duurka.
Xilliga xagaaga - laba cunto maalintii: 6-7 subaxnimo iyo 18 galabnimo.
Xilliga jiilaalka - saddex cunto oo maalintii: quudinta ugu horeysa saacadda 9, ka dibna 2 galabnimo iyo 8da galabnimo.
Marka quudinta lakabyada - sidoo kale saddex cunto maalintii: markii ugu horeysay ee 5 subaxnimo, ka dibna saacadda 13 subaxnimo iyo saacadda 21:00.
Qadarka cuntada ee shakhsiyaadka da'doodu kala duwan tahay iyo waqtiyada kala duwan ee nolosha ayaa ka duwan. Tusaale ahaan, xayawaanka yaryar waxay u baahan yihiin 30-40 g oo cunto ah maalin kasta, heerka maalinlaha ah ee xamaamka ka hor inta aan la jarin 50 g, iyo inta lagu guda jiro xilliga qoyaanka iyo dhalmada - kor u qaadaya 60 g. bariis) iyo sonkorta.
Waa muhiim! Aad ayey muhiim u tahay in la raaco nidaamka quudinta iyo hubinta cunto isku dheeli tiran. Haddii kale, xamaamyadu waxay daali doonaan oo si deg deg ah u luminayaan qaab ciyaareedkooda ciyaaraha fudud.
U hubso inaad ku darto macdanta macdanta: shellfish dhulka ah, qolofka ukunta, dhuxusha, iyo milixda. Dheeraadka ugu dambeeya waa in lagu qasiqiyaa biyaha marka la eego qiyaasta 20 g halkii 1 litir oo lagu duugo boodh.
Laakiin mid ka mid ah waxyaabaha soo socda si loo siiyo xamaam oo si adag waa la mamnuucay, haddii kale cudurka aan laga fogaado:
rootiga iyo alaabada la dubo. Sababta hargabka oo hakad geliso habka dheef-shiidka;
hilibka hilibka iyo kalluunka. Meydka baaluqa looma habeeyo si uu u qodo kooxdan alaabta;
caanaha iyo jiiska. Qoollo ma laha lactobacilli, marka lagu daro, way adagtahay in ay la qabsadaan dufanka aadka u badan.
Maanta, iibinta xamaamka ka soo jilciya ma aha mid adag, caadi ahaan shimbiraha ayaa lagu iibiyaa laba-labo. Dayactirka xamaamyada dagaalku waa hawl culus oo u baahan in badan oo fiiro gaar ah iyo shaqaale ah beerta digaaga.
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loo sameeyo nuujin qoyan gacmahaaga.
Si kastaba ha noqotee, cayaarta xiisaha leh ee wargeysyadaasi waxay ku noqon doontaa abaalmarin ku filan oo ku saabsan shaqadaas.